Germalka oo maanta Maxkamad soo taagaya Nin Shan Qof dilay dhawaan
HomeWararka CaalamkaGermalka oo maanta Maxkamad soo taagaya Nin Shan Qof dilay dhawaan
Nin Jarmal ah ayaa maxkamad la soo taagi doonaa Khamiista maanta oo lagu eedeeyay inuu dilay shan qof oo uu ku jiro ilmo yar markii uu gaarigiisa jiirsiiyay dad wax ka iibsanayay magaalada Trier ee koonfur -galbeed.
51 jirkan ayaa la sheegay inuu la ildaranaa dhibaatooyin nafsaani ah oo uu ku sakhraamay khamriga markii uu gaari ku waday waddada dadka ku lugeeyaan xiliga diyaargarowga Kirismaska ​​ee la soo dhaafay.
Marka laga soo tago shan dacwadood oo dil ah, ninka, oo aysan magaciisa sheegin mas’uuliyiinta, ayaa wajahaya 18 dacwadood oo isku day dil ah iyo 14 kale oo dhaawac jidh ahaaneed ah.
Garsoorayaasha maxkamadda gobolka ee magaalada ayaa go’aamin doona in ninka, oo aan wax badan laga garanayn si guud, uu gebi ahaan ama qayb ahaan mas’uul ka ahaa falalka, sababo la xiriira arrimaha dhimirka ee la yaqaan.
Qiimayn khabiir oo la diyaariyey ka hor maxkamadaynta ayaa lagu go’aamiyey in eedaysanuhu uu qabo cudurka dhimirka, iyo sida boolisku sheegayo, waxay bixin kartaa oo keliya qiyaas dhacdooyin mararka qaarkood is burinaya.
Baadhitaanno ay boolisku sameeyeen xilligaas waxay meesha ka saareen in ay jiraan arrimo siyaasadeed, argagixiso ama diimeed.